Ahɔho & Nsrahwɛ: Yehowa Adansefo Adwumayɛbea a Ɛwɔ Patterson, Wallkill, ne Warwick
Adwumayɛbea ne Nsrahwɛ Ho Nsɛm
Yɛde anigye reto nsa afrɛ wo sɛ bra bɛhwehwɛ yɛn adwumayɛbea ne baabi a yetintim nhoma no. Hwehwɛ ɔman ne bere a yɛde nkurɔfo kyinkyin adwumayɛbea hɔ.
Kyerɛ Baabi a Wopɛ Albania Angola Argentina Australia Barbados Belgium Benin Bolivia Brazil Britain Bulgaria Burundi Cameroon Canada Central African Republic Chile Colombia Côte d’Ivoire Croatia Democratic Republic of the Congo United States
Yɛ Wo Nsrahwɛ Ho Nhyehyɛe
Ansa na wobɛyɛ w’akwantu ho ntotoe abɛhwɛ yɛn adwumayɛbea ahorow a ɛwɔ United States no, yɛsrɛ wo fa w’abisade fa yɛn wɛbsaet ha. Baabi a wopɛ sɛ wokɔhwɛ biara no, di akwankyerɛ a ɛwɔ ase ha no so fa w’abisade mane yɛn. Hyɛ no nsow sɛ, sɛ wopɛ sɛ wuhu biribiara ani so yiye a, mmeae mmiɛnsa no mu mmienu pɛ na wubetumi akɔhwɛ da koro.
Sɛnea mo dodow te biara, ansa na mobɛba abɛsra yɛn adwumayɛbea ahorow a ɛwɔ United States no mu biara no, ɛsɛ sɛ mudi kan de mo abisade mane yɛn.
Ekuw a Emufo Nnu 20
Hyɛ no nsow: Sɛ wopaw mmeae a ɛwɔ ase ha no mu baako a, yɛn wɛbsaet no de wo bɛkɔ wɛbsaet foforo ama woakowie wo nsrahwɛ ho nhyehyɛe no. Sɛ biribi a ɛfa sikasɛm ho te sɛ “payment,” “total,” anaa “taxes ne fees” ba screen no so a, bu w’ani gu so, efisɛ woreyɛ wo nsrahwɛ no ho nhyehyɛe a, wuntua sika biara. Sɛ yɛn nsa ka w’abisade no a, yɛde w’address ne wo fon nɔma bɛma Betel a wopɛ sɛ wokɔsra hɔ wɔ United States no ama wɔadi ho dwuma. Wo ho nsɛm biara a wode bɛmane yɛn no, yɛde bedi dwuma sɛnea mmara ma kwan.
Mepɛ sɛ mebɛsra Patterson
Mepɛ sɛ mebɛsra Wallkill
Mepɛ sɛ mebɛsra Warwick
Ekuw a Wɔyɛ 20 Anaa Nea Ɛboro Saa
Sɛ ekuw bi pɛ sɛ wɔbɛsra yɛn adwumayɛbea a ɛwɔ Patterson, Wallkill, anaa Warwick a, wɔmfa wɔn abisade mfa intanɛt so mmrɛ yɛn.
Twa Nsrahwɛ No Mu
Sɛ obi anaa kuw bi pɛ sɛ wotwa wɔn nsrahwɛ no mu a, wɔnhyehyɛ fɔɔm a ɛwɔ intanɛt so no.
Yɛsrɛ wo, di kan fa w’abisade fa intanɛt so mane yɛn ansa na woayɛ w’akwantu no ho nhyehyɛe.
Dwoda kosi Fida
Anɔpa 8:00 kosi 11:00 ne awia 1:00 kosi anwummere 4:00
Edi nnɔnhwerew mmienu
Nea Wɔyɛ wɔ Hɔ
Mfonini a ɛba yɛn nhoma mu no, ɛhɔ na wɔyɛ ho adwuma, na wɔyɛ nsɛm a yɛbɔ tie ne video ahorow nso wɔ hɔ. Bible sukuu ahorow a ɛkɔ so wɔ hɔ no, sɛ wokɔsra hɔ a, wobɛte ho asɛm.
Afe biara wotintim Bible ho nhoma bɛboro ɔpepem 25. Wɔde nhoma ahorow a ɛwɔ kasa bɛboro 360 mu kɔma dwumadibea pii wɔ wiase afanan nyinaa, na wɔde bi nso kɔma Yehowa Adansefo asafo bɛboro 15,000 wɔ United States, Canada, ne Caribbean.
Warwick nsrahwɛ no befi ase Dwoda, April 3, 2017. Yɛsrɛ wo, di kan fa w’abisade fa intanɛt so mane yɛn ansa na woayɛ w’akwantu no ho nhyehyɛe.
Anɔpa 8:00 kosi anwummere 4:00.
(Nsrahwɛ a obiara nni w’anim; wo ara na wubekyinkyin hɔ)
Anɔpa 8:00 kosi 11:00 ne awia 1:00 kosi anwummere 4:00.
(Nsrahwɛ a obi de wo bɛkɔ)
Nsrahwɛ a Obiara Nni W’anim; wo ara na wubekyinkyin hɔ
Wubehu Bible ne Onyankopɔn Din. Wudu ha a, Bible ahorow a ɛyɛ den sɛ ɛnnɛ wubehu bi no, ebi wɔ ha. Afei nso wobɛte sɛ nkurɔfo yɛɛ biara sɛ wobeyi Onyankopɔn din afi Kyerɛwnsɛm no mu, nanso ankosi hwee. Bio, wubehu Bible a ɛho yɛ na ne Bible ho nneɛma bebree a egu adeɛ mu retwa ne ho.
Nkurɔfo a Yehowa Din Da Wɔn So. Ɛha nso, wode w’ani kosua behu Yehowa Adansefo honhom fam agyapade. Ebi yɛ nneɛma a wɔadrɔdrɔ, mfonini, nea wɔakurukyerɛw ne afoforo suahu. Ɛboa wo ma wuhu sɛnea Yehowa de nkakrankakra akyerɛ ne nkurɔfo kwan, akyerɛkyerɛ wɔn, na wɔahyehyɛ wɔn ama wɔreyɛ n’apɛde.
Adwumayɛbea Ti​—Gyidi a Wɔda No Adi. Ɛha nso, biribi wɔ ha a ɛbɛma woahu sɛnea Akwankyerɛ Kuw no boayikuw ahorow no yɛ wɔn adwuma. Bio nso, wubehu sɛnea wɔboa Yehowa Adansefo ma wotie Kyerɛwnsɛm mu ahyɛde a ɛne sɛ wonhyiam, wɔnyɛ nkurɔfo asuafo, wonsua Onyankopɔn Asɛm, na wɔnnodɔ wɔn ho no.
Nsrahwɛ a Obi De Wo Bɛkɔ
Nsrahwɛ yi bedi simma 20. Ɛbɛma woahu Ɔfese Adan ne Adan foforo. Afei nso wubehu Warwick nsase a ɛdeda ho.
Wubetumi atwe nsrahwɛ ho nhoma no bi wɔ ha
Adwumayɛbea ne Nsrahwɛ: United States